Magazin TuxInfo Nke 42 dị njikere maka nbudata | Site na Linux
Magazin TuxInfo Nke 42 dị njikere maka nbudata
Onu ogugu ohuru nke magazin kacha mma banyere Linux na Spanish. Na ohere a, anyị ga-achọta isiokwu ndị na-atọ ụtọ banyere Ezigbo, ihe nkesa maka SMEs, nyochaa nke ndi okike nke Guifi.net, nkuzi na-adọrọ mmasị na Ntụtụ sql, a pụrụ iche banyere nchekwa na smartphones, nyochaa nke Asus Ess Kedo akwa ngbanwe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Lee anyị bụzị ọzọ na mbipụta Tuxinfo ọzọ. Dị ka oge niile anyị na-anwa ikpuchi isi okwu kachasị dị ugbu a, akụkọ dị oke mma, akwụkwọ ntuziaka izugbe. Mana site n'ebe a achọghị m ịhapụ ọnọdụ nke dọọrọ mmasị m karịsịa.
Dika onye obula gha ama, onwu nke onye mbu CEO nke Apple, Steve Jobs, nyere otutu ihe ikwu banyere ya n'uwa, ndi mmadu ndi amaghi banyere ya putara ikwu okwu, akwusighi ozi akuko n'otu akuko, ma ihe kacha akpo uche bụ ihe Richard Stallman kwuru dabere n'ọnọdụ a.
Ọtụtụ ndị sitere na ụwa Apple katọrọ okwu siri ike nke Stallman, n'echeghị n'echiche na ọ na-ekwu naanị maka omume ya sitere na ihe ndị Apple kere. N'ọnọdụ ọ bụla ekwughi okwu kpọmkwem banyere Ọrụ, obere afọ ojuju na ọnwụ ya.
Nke a mere Richard ka ọ pụọ ọzọ ịkọwa okwu ya, wee were okwu ya dị nro dị nro.
Dịka onye ndezi nke Tuxinfo na n’onwe m kwenyere na ọgba aghara niile nke ndị Apple Apple kpatara bụ mmeghachi omume gabigara ókè, ebe Stallman ekwughị ihe ọ bụla dị iche na ihe o gosipụtara ọtụtụ afọ.
Aghọtara na Stallman bụ onye nwere ezigbo echiche, nke mere na site na nhụta ya enwere naanị oji na ọcha; na-enweghị ike inwe ihe ọ bụla iwu ndị ọzọ karịa nke kwusara site free software. O nwere ike ịbụ ezighi ezi ma ọ bụ ziri ezi, mana ọ bụ ọnọdụ ha ma anyị ga-asọpụrụ ya.
Iji gbanwee isiokwu ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe nke mbipụta a anyị mụtara na Mark Shuttleworth n'onwe ya, na N'ajụjụ ọnụ maka Zdnet, kwupụtara na n'afọ na-abịa anyị ga-enwe nhọrọ ọhụrụ maka smartphones na mbadamba. N'ezie, ọ ga na-arụ ọrụ na Ubuntu mobile. Ezigbo akụkọ n'ụzọ.
Budata Tuxinfo 42
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Magazin TuxInfo Nke 42 dị njikere maka nbudata
Ihe dị ọhụrụ na Firefox 9 beta
Ngwọta nke njehie: "enweghị ike imeghe ngosi :: 0.0"